Otú nyefee Photos si iPhone ka iPad na ndị ọzọ nile Files - na Best Solutions na-ebe a
Apple nwetara ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị elu uzu taa na iPhone na iPad bụ n'etiti ha kacha mma ngwaọrụ nke nwetara ndị niile ọhụrụ nkà na ụzụ atụmatụ. N'ihi na nke dị iche iche ojiji na nsụgharị ọtụtụ ọrụ nwetara ma iPhone na iPad ma si otú ha mkpa mmekọrịta ha faịlụ n'etiti ma ngwaọrụ nke mere na ha nwere ike iji ndị faịlụ na ihe ọ bụla nke ndị ngwaọrụ ha chọrọ. Ma ọtụtụ ndị ọrụ na-amaghị otú ha nwere ike ndị faịlụ na iPhone nnọọ mfe na ha iPad dị ka mma. Ebe a na isiokwu a, m ga-egosi gị nkọwa na transfer foto site na iPhone ka iPad na akụkụ mbụ nakwa ndị ọzọ faịlụ dị ka music, videos, kọntaktị site na iPhone ka iPad na abụọ n'ọnụ akụkụ.
Nkebi nke 1: Nyefee Photos si iPhone ka iPad
Nkebi nke 2: Atụmatụ na iji Nyefee Music, Videos, Ndi ana-akpo na ndị ọzọ Site iPhone ka iPad
Foto site na iPhone ka iPad nwere ike zigara iji Wondershare MobileTrans, Photo Stream na Ikuku Nyefee App. Na Wondershare MobileTrans ga-kacha ụzọ mezuo na na ọ nwekwara ike mfe nyefee ndị ọzọ faịlụ dị ka music, video, kọntaktị na ndị ọzọ.
# Ngwọta 1: Wondershare MobileTrans
Nzọụkwụ na-atụle n'okpuru maka foto nyefe si iPhone ka iPad iji Wondershare MobileTrans na kacha ụzọ na nanị otu click. Ka anyị buru ụzọ ihe Wondershare MobileTrans bụ na ihe ọ pụrụ ime.
Nyefee Photos si iPhone ka iPad, mfe na rụọ ọrụ nke ọma!
Nyefee foto site na iPhone ka iPad na nanị otu click na ngwa ngwa
Ọ bụghị naanị photos. Ị nwere ike iji ya nyefee ndị ọzọ nile faịlụ dị ka kọntaktị, ngwa, ozi, kalenda, music, video na ndị ọzọ.
The kasị mma ngwá ọrụ jikwaa gị iOS ngwaọrụ na otu ebe
Cheta na: Nke a bụ maka Windows ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, ị nwere ike na-atụgharị Wondershare MobileTrans maka Mac inyere ya aka.
Ugbu a, ka abịa zuru ezu nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Ị ga mkpa ibudata ma wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa gị. Ẹkedori ya na ị ga-ahụ ihe omume akpan window pụtara dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ ma gị iPhone na iPad gị na kọmputa. Jide n'aka na kọmputa nwere ike regonize ha n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ ha agaghị na-ahụrụ site usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 3: Pịa "na ekwentị ekwentị Trannsfer" na screenshoot n'elu. Mgbe ahụ ị ga-ahụ na ma gị iPhone na iPad na-egosipụta na usoro si window. Iji nyefee foto site na iPhone ka iPad, i kwesịrị ebe ahụ iPhone na n'akụkụ nke ekpe, sị "Isi Iyi", na iPad n'akụkụ aka nri maka na-aga, dị nnọọ ka e gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 4: Nyefee foto site na iPhone ka iPad ga-abụ nnọọ mfe mgbe ahụ. Tinye akà rà checkbox nke foto na pịa "Malite Copy". Ugbu a na-ebufe amalite. Ị nwere ike mkpa ichere maka tupu ya okokụre ebe foto gị ejikari were ụfọdụ ndị ọzọ ohere mgbe ahụ kọntaktị ma ọ bụ ndị ọzọ na faịlụ ederede.
I nwekwara ike họrọ checkboxes nke a ọtụtụ ndị ọzọ na faịlụ dị ka SMS, ngwa, music, videos na ndị ọzọ.
Ebe a na-otú i nwere ike nyefee foto site na iPhone ka iPad na Photo Stream.
Nzọụkwụ 1: Ke akpa jide n'aka na ị na-aka na gị pụrụ iche akaụntụ na iCloud nke ma iPhone na iPad na otu Apple ID. Ị nwere ike crate Apple ID si https://appleid.apple.com/
Ugbu a ị chọrọ ka Tụgharịa na My Photo Stream na gị iPhone. Nwere anya na oyiyi n'okpuru nke na-egosi na steps-
Nzọụkwụ 2: Soro nzọụkwụ dị ka e gosiri na onyinyo n'elu. Open Ntọala mgbe ahụ na-emeghe iCloud mgbe na họrọ Photos na mgbe ahụ ị ga-ahụ ọzọ ihuenyo ebe ị ga-Tụgharịa na My Photo Stream.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, na gị na iPad ime ndị na-esonụ dị ka e gosiri na oyiyi below-
Dị ka e gosiri na onyinyo n'elu, Pịa na Photos wee họrọ Photos na e họrọ Albums ebe ị ga-My Photo Stream nchekwa. Ugbu a, ị ga-ahụ foto niile gị iPhones na-synced gị iPad.
#Solution 3: Ikuku Nyefee App
Nzọụkwụ na-atụle n'okpuru maka foto nyefe si iPhone ka iPad iji Ikuku Nyefee App -
Nzọụkwụ 1: Ke akpa download na wụnye Ikuku Nyefee App na ma iPhone na iPad.
Cheta, ị ga-jikọọ ma iPhone na iPad ka otu wifi netwọk na-eme ka ọrụ a.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a Run Ikuku Nyefee App na ma iPhone na iPad.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a Kpatụ Send Button na ekwentị gị na ihuenyo na a ọhụrụ na ihuenyo dị ka oyiyi na n'akụkụ aka nri ga-apụta.
Ị ga-ahụ abụọ nhọrọ 'Computer' & 'iPod iPhone iPad' na ihuenyo ebe ị ga-enweta na Ndi otu.
Nzọụkwụ 4: Ma site ọhụrụ window họrọ foto na vidiyo na ị chọrọ izipụ
Na enweta na Send bọtịnụ na na foto na vidiyo ga--atụkwasịkwara gị iCloud.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a na gị iPad si Ikuku Nyefee App ihuenyo enweta na Refresh Ngwaọrụ na mgbe ahụ ị ga-ahụ ngwaọrụ dị. Enweta na-enweta site n'aka iPhone / iPad / iPod nke ga-ajụ maka ikike na gị iPhone na mgbe ị na-anabata, gị foto na vidiyo ga-agafere si gị iPhone gị iPad.
1 Nyefee kọntaktị site na iPhone ka iPad
Ị nwere ike mfe nyefee kọntaktị site na gị iPhone gị iPad na na gị mkpa iji enyemaka nke 3rd otu sava dị ka iCloud, gmail wdg Ebe a na-ụzọ maka ebufe kọntaktị iji iCloud na-atụle n'isiokwu below- N'ezie, Wondershare MobileTrans ga-kacha ụzọ na-gị faịlụ kpọfere na otu click dị ka e gosiri n'elu.
Nzọụkwụ 1: Ke akpa ịnyagharịa Ntọala gị iPhone na ị ga-ahụ nhọrọ dị ka e gosiri na onyinyo nke n'akụkụ aka nri. Site ndepụta mkpa ka ị enweta na iCloud na a ọhụrụ sub-menu ga-apụta.
The menu ga-adị ka oyiyi na n'akụkụ aka nri ebe ị ga-banye na akaụntụ email gị nke ị na-eji ịdebanye aha maka iCloud. Ugbu a dị ka ị na-ahụ nnọọ nke ebe image, atụgharị bọtịnụ na-esote Ndi ana-akpo si anya ka On
Nzọụkwụ 2: Mgbe ahụ, ị ga-jụrụ na abụọ nhọrọ Marge na Kagbuo. Ị ga-enweta Marge na gị iCloud ga-adị njikere syncing kọntaktị.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a laghachi kọntaktị na ume ya, na ihe nile kọntaktị gị ga-synced gị iCloud.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a na gị iPad, ịnyagharịa ntọala na banye na yo otu email akaụntụ nke ị na-eji na iPhone. Ozugbo ị na-eme mgbe niile kọntaktị gị ga-adị gị iPad dị ka mma.
2 Nyefee zụrụ Music na Video si iPhone ka iPad
I nwekwara ike nyefee gị zụrụ music si gị iPhone gị iPad nnọọ mfe iji iTunes ngwa. Ọzọ, na-ebufe music na video si iPhone ka iPad ga-abụ nnọọ mfe na enyemaka nke Wondershare MobileTrans. Ego iwebata ya n'elu.
Nzọụkwụ 1: Ke akpa download na wụnye iTunes na PC gị na / Mac http://www.apple.com/itunes/download/.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a jikọọ gị iPhone gị PC na iji eriri USB. Ugbu a na-emeghe iTunes on pc ma họrọ Store si nhọrọ na ị ga-ahụ a na ihuenyo wee họrọ ikike Computer ebe ọ ga na-arịọ gị ịbanye gị Apple NJ na mgbe abanye ya pịa ikike na ngwaọrụ gị ga-ikike.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a họrọ ngwaọrụ gị na iTunes si Ngwaọrụ ndepụta wee họrọ Nyefee ịzụrụ mgbe ahụ gị niile zụrụ music na vidiyo ga-agafere nke ikike ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4: Mgbe na iwepu iPhone na jikọọ na iPad wee pịa download zụrụ music na ndepụta na ndị niile gị music ga-ebudatara gị iPad. Nke a nzọụkwụ ga-agafeta naanị gị zụrụ music ma ọ dịghị ndị ọzọ nke i depụtaghachiri ngwaọrụ gị.
Iji nyefee music nke i depụtaghachiri, ị ga-banye ma ikike ngwaọrụ dị ka e gosiri na mbụ. Mgbe ahụ ị ga-ahụ na ihuenyo dị ka oyiyi na nri kwadoro. On Media họrọ Music.
A ọhụrụ ákwà ga-apụta dị ka oyiyi gosiri below-
Na ndepụta n'okpuru ngwaọrụ gị nhọrọ pịa Music Library na ị ga-ahụ gị dum ngwaọrụ music ga-kwajuru na ihuenyo. Ugbu a họrọ akpan akpan music ị chọrọ nyefee ma ọ bụ họrọ niile ma ọ bụrụ na ị chọrọ niile music na-enyefere gị iPhone.
Ugbu a, mgbe na-ahọpụta, pịa Nyefee-ahọrọ na iTunes dị ka e gosiri na onyinyo n'elu na ndị niile gị music ga-agafere nke iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Ugbu a Ikwupu gị iPhone si PC na jikọọ na gị iPad ka PC na ị ga-ahụ na ngwaọrụ gị aha na iTunes ihuenyo.
Ugbu a họrọ Iji aka Jikwaa Music na Videos na ihuenyo wee pịa Mee.
Ugbu a, ị ga-ahụ a na ihuenyo ka e gosiri n'okpuru ebe ị ga nwere iji họrọ On Nke a na ekwentị.
Ugbu a pịa Music ma ọ bụ vidiyo na n'aka ekpe nke ihuenyo. Ugbu a Dọrọ na dobe niile music na vidiyo si iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iPad.
Mgbe na ọ bụrụ na ị na-emeghe music ma ọ bụ vidiyo nchekwa, ị ga-ahụ gị niile music videos ga-ahụ na gị na iPad nke ị bufee.
3 Nyefee Files (DOC, TXT, wdg) si iPhone ka iPad
I nwekwara ike nyefee faịlụ dị ka DOC, TXT, wdg si iPhone ka iPad iji iTunes faịlụ nkekọrịta. Ma iji mee nke ahụ, ị ga-mbupụ gị faịlụ gị PC mbụ si gị iPhone na mgbe mbubata ndị gị iPad si PC. Wondershare MobileTrans Nwekwara ike ime na ma na-ebelata gị site na nsogbu ọ bụla. Lelee ya si n'elu.
Nkọwa zuru ezu nyere below-
Mbupụ a akwụkwọ gị PC
Nzọụkwụ 1: Ke akpa emeghe iTunes na PC na jikọọ gị iPhone gị PC na họrọ ngwaọrụ gị na ngwaọrụ ndepụta nke iTunes window nke e gosiri na mbụ.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a emeghe akwụkwọ ị chọrọ mbupụ na toolbar mgbata icon dị ka e gosiri na onyinyo nri site na ndepụta mgbata Share & Bipute.
Nzọụkwụ 3: Ị ga-ahụ ọzọ ihuenyo dị ka ị na-ahụ na onyinyo n'okpuru. Họrọ Detuo na iTunes site na listi.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a ọhụrụ window ga-apụta dị ka ị na-ahụ na ihe oyiyi below-
Jiri nhọrọ iji họrọ ụdị faịlụ na mgbe ahụ Dọrọ & Idebe gị faịlụ site na gị iPhone gị PC.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a Ikwupu gị iPhone na jikọọ na gị iPad gị PC. Mepee iTunes na họrọ ngwaọrụ gị. Mgbe ahụ Dọrọ & Idebe faịlụ site na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iPad na gị DOC, TXT wdg faịlụ ga-abụ maka iji na gị iPad dị ka mma.
iPhone ka Computer Nyefee: Nyefee ihe niile si iPhone ka Computer Mfe
Otú nyefee Photos, Video, Kalinda, Ndi ana-akpo, iMessages na Music si iPod
A ga-enwe iPhone 7 ma ọ bụ iPhone 6s?
Otú nyefee Music si iPhone ka LG G2
Otú nyefee na nkwado ndabere iPhone SMS Ozi iMessage mkparịta ụka na-PC ma ọ bụ Mac
> Resource> iPhone> otú nyefee Photos si iPhone ka iPad na ndị ọzọ nile Files